Hugo Chavez oo laga daweeyey cudurka kansarka – Radio Daljir
Caracas, May 12 – Madaxweynaha dalka Venezuelan Hugo Chavez ayaa kasoo laabtay dalka Cuba, isagoo sheegay in si dhamaystiran looga dabiibay cudurka Kunsar oo uu bilihii ugu dameeyey u xanuunsanaa.
Muuqaalo TV-ga laga sii daayey ayaa muujinayey Mr Chavez oo salaamaya wasiiraddiisa , islamarkaasina qaadaya heeso wadani ah ,kaddib markii uu ka soo degay madaarka caalamiga ah ee magaalada Caracas ee xarunta dalkaasi.
Xaalada caafimaad ee Madaxweyne Hugo Chavez ayaa dhalisay xiisad dhinaca siyaasadda ah,iyadoo siyaasiyiinta mucaaradka ah ay ku doodayaan in haddii madaxweynuhu xanuunsanyahay aanu buuxinkarin xafiiska ugu sarreeya qaranka.
?waxaan idiin sheegi karaa in aan maalmihii ugu dameeyey dhamaystay daweyntii,waxaan la imi rajo wanaagsan oo ah in daweyntan ay shaqayn doonto ,sidaasi ayeynu rajeyneynaa ,markasta waaxan illaah weydiisanaynay in uu ina siiyo mucjiso nolosha ah si aynu u khidmayno ama u adeegno” ayuu yiro Hugu Javez.
Mdaxaweyne Hugo Chavez oo 57 jir ah ayaa awooodda dalkaasi Venezuela hayey tan iyo sanadkii 1999kii ,waxana uu sanadkii 2002dii ka badbaaday inqilaab ama afgenbi la doonayey in xukunka lagaga tuuro oo laga soo abaabulay dhinaca dalka Maraykanka.